Kuyambuka Kunovhenekera Kwakajeka Kwenzvimbo paNguva Yechingoro Transbay Terminal
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kuyambuka Kunovhenekera Kwakajeka Kwenzvimbo paNguva Yechingoro Transbay Terminal
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kuchengeterwa kwechikafu chekunze nechinwiwa, varaidzo, uye zvivaraidzo zvinopa hupenyu kuguta reSan Francisco uye kununura kunatsiridzwa kunodiwa munharaunda yeEast Cut nekuvhurwa kweCrossing kuEast Cut.
Kuyambuka chiitiko chenguva pfupi chakaitwa mukupindura uye mukubatana naMayor London Breed's Downtown Kudzorera Chirongwa.
Iyo yakawanda-gore kuyedza kuyedza saiti iyi kunounza inodiwa mabhenefiti enharaunda nepo ichipa mukuvhurwazve kweguta reSan Francisco.
Iyo inenge 3.5-acre block iri kushandurwa kuita oasis yeguta.
Kumabvazuva Kucheka Kumhara Partner (ECLP), mubatanidzwa pakati Dunhu reEast Cut Community Batsira (Kumabvazuva Cheka CBD), Nestory Park, Kushanda Chaiko uye Mugwagwa Soccer USA, yazivisa kuvhurwa zviri pamutemo kwe Kuyambuka kuEast Cut, nharaunda inosvika kune yaimbova Temporary Transbay Transit Terminal. Kuyedza kwegore-rose kumisa saiti kunounza mabhenefiti anodikanwa enharaunda nekupa zvakare kuvhurwa kwedhorobha reSan Francisco uye kutsigira mabhizinesi madiki akatarisana nematambudziko asina kumboitika panguva yedenda reCCVID-19.
Kuvhura Nyamavhuvhu 10, 2021, Iyo Kuyambuka chiitiko chenguva pfupi chakagadzirwa mukupindura uye mukubatana naMayor London Breed's Downtown Kudzorera Chirongwa. Iyo inenge 3.5-acre block pakati peHoward, Main, Folsom, uye Beale Street iri kushandurwa kuita oasis yemumaguta ine gadheni remhuri-inofarira mhuri, marori ezvokudya, nhandare yenhabvu uye pasi pevhu muchikamu chekutanga. Sinema yekunze, chikafu uye zvitoro zvekutengesa, musika wemunharaunda, nenzvimbo dzekutamba zvichawedzerwa munguva pfupi iri kutevera.
"Gore rino ratiratidza kuti zvakakosha sei kuwana nzvimbo yekunze kune hutano hwemagariro edu uye nekusimudzira kweguta redu," akadaro Meya Breed. "Ino saiti yakagadzirirwa zvakanaka ichapa nzvimbo yakachengeteka uye inokwezva kune vese vemunharaunda uye vashanyi veguta redu kuti vabude panze uye vanakidzwe nehunyanzvi hwepadhorobha redu."
"Panga paine kurudziro yemakore mazhinji nevagari kuti vashandise saiti, saka tanzwa tichisungirwa kuvhura nekukasira nekuwedzera chirongwa mumwedzi inotevera," akadaro Kipp Kjeldgaard weReal Active. “Tichifunga zvinoitwa neCOVID-19 pamabhizimusi, kuvhura nekukasira kwakakoshawo kubatsira vanamuzvinabhizimusi vemuno nekuisa ruoko mukudzosa vashandi nevashanyi Guta reSan Francisco. "
"Kubatana nemabhizimusi emuno nemasangano enharaunda kupa chirongwa chakasiyana siyana, chirongwa chitsva ichi chinofadza chichafambisira mberi kupora kwedhorobha reSan Francisco uye chichava nzvimbo yekuti vese vanzwe kugamuchirwa. Tinokoka munhu wese kuti abatane nesu mukupemberera zvese zvinoita San Francisco guta repasi rese; chikafu chikuru, mimhanzi, zviitiko uye nzvimbo yekuti vese vaungane munzvimbo yakasarudzika. ”
Zvirongwa zvinotungamirwa nenharaunda mhinduro
IEast Cut CBD, isingabatsiri iyo inopa kuchenesa, kuchengetedzeka, uye kugadzirisa mapaki nenzvimbo dzakashama mudunhu, yakashanda kumisikidza saiti kweanopfuura makore matatu. Sechikamu chezviitiko izvi, kuongororwa kwevakapfuura 1,200 vavakidzani kwakaitwa mukubatana pamwe neDunhu 6 Hofisi yaManeja Matt Haney, vachibvunza vakapindura nezvavanoda zve pa-saiti zvirongwa.
"Mhinduro iyi yakabatsira mukutungamira kubatana kwedu kwenzvimbo iyi uye vashanyi vezvirongwa vachasangana nemhinduro idzi," akadaro Andrew Robinson, The East Cut CBD Executive Director.
"Iyi inharaunda iri kukura uye kubudirira, asi inonyatsoda nzvimbo yakavhurika yenharaunda kuti iungane, itambe uye inakidzwe," akadaro Supervisor Haney. “Kuyambuka kwakagadzirirwa kuzadzikisa chinodikanwa ichi takabatana pamwe nevagari. ”
Pakati penzvimbo iyi panenge paine gadheni remhuri-rine hushamwari uye bhawa rinoshandiswa neMonarch Beverage Catering, iyo inomhanya nzvimbo dzese dzezvidhina nematope uye zviitiko zvekunze zvekunze kweanopfuura makore gumi muGuta. Kununura zviitiko kubva munzvimbo dzakasiyana siyana, kusanganisira nzvimbo yemhuri, imba yekutandarira, nenzvimbo inochengetedzwa yemapoka nemasangano, gadheni rehwahwa richava nematafura epikiniki, pekugara pekugara, uye nepasi pevhu chakagadzirwa nemunyanzvi wemuno Laura Stevenson.
Nepo gadheni rebheri richizopoteredzwa nezvikafu uye zvitoro zvekutengesa zvakavakwa namuzvinabhizimusi wemuno uye muridzi weLightbox Café, Hugo Santana, mutsara wakasiyana-siyana wemarori ezvikafu anozotora nzvimbo yavo kudzamara kugadzirwa nekugadzwa kwapera.
Yemunharaunda yakavakirwa, Mugwagwa Soccer USA ishamwari yenguva refu yeGuta reSan Francisco uye rinotungamira sangano renyika mukushandisa nhabvu yeshanduko yemagariro, ane makore anopfuura gumi echiitiko achishanda muSan Francisco uye mhiri kweBay Area, California, uye nyika. Street Soccer USA ichaisa maviri mamiriro enhabvu nhabvu matare ekugamuchira makwikwi emitambo yekutamba kune vese mukuwedzera kune kuitisa mimwe mitambo-yakavakirwa zviitiko uye mashandiro. Street Soccer USA ichadzidzisa zvakare nekuhaya vanhu vemunharaunda kuti vadzidzise uye vagadzirise zvirongwa zveStreet Soccer Community Club uko vechidiki vemunharaunda vanogona kuwana hunyanzvi hwehupenyu kuburikidza nhabvu yemahara.
“Nekushandisa simba rinobatanidza remutambo uyu, unounza pamwechete vatambi zvisinei nerudzi, chinamato kana hupfumi, mapaki eStreet Soccer USA anova nzvimbo dzekuzvikudza munharaunda. Minda yedu yakagadziridzwa nemweya mumwe chete, uye tinofara kukoka munhu wese kuti atambe pano uye vatore chikamu musimba rebhora kuti vabatane, ”akadaro Street Soccer USA Managing Director, Rob Cann.
Chikwata chekuyambuka chinotarisirawo kuti bhaisikopo rekunze richave rakagadzirira kugamuchira vanofarira mafirimu kumitambo yakatarwa nguva pfupi mushure mekuvhurwa kwenzvimbo. Chiitiko uye mumhanzi anosimudzira Noise Pop Maindasitiri, ayo anoshanda Bay Area's DoTheBay.com uye yakabatsira kuunza iyo Fort Mason Flix uye Sundown Cinema Firimu Nights kuhupenyu, yakave ichivimbiswa kuvandudza nekushandisa iyo yekunze sinema.
Pamusoro penzvimbo yakazvipira yemagariro nharaunda yakavhurika kune vese vanhu uye varairidzi, boka neboka makirasi anozopihwa neLuxeFit, iyo pari zvino inoshanda kuProxy muHayes Valley.
Iyo Yekuyambuka Yemunharaunda Nzvimbo ichave nezvakawanda zveruzhinji zveruzhinji, kusanganisira anosvika zviuru zvishanu makumbo mana enzvimbo yemukati iyo inogona kuchengetwa nemapoka enharaunda mapoka pasina muripo. Management iri kuvandudzawo musika wenzanga, uyo mukuwedzera pakutengesa zvinhu zvitsva, zvemuno munhu zvaangawana pamusika wemurimi, zvichaitawo zvinhu zvakarongedzwa uye zvekutengesa.
Kutenda kuisheni kubva kuSan Francisco Hofisi yeCommunity Investment uye Zvivakwa (OCII), Iyo Crossing iri kushanda nayo En2Action uye La Cocina.
David Flaherty weNestory Park akati, “Chirongwa ichi chinomiririra kuhwina kukuru munharaunda, mabhizimusi madiki uye kuvhurwa kweGuta. Tichifunga kuti dunhu rakawedzera zviuru zvezvivakwa mudunhu rese rezvehupfumi, munzvimbo yakatwasuka, chirongwa ichi chinosangana nechishuwo chakakomba nekupa mabhenefiti enharaunda kwaange achishaya. Pakuitwa zvizere, zvinofungidzirwa kuti anopfuura mabhizimusi emuno makumi matatu uye vemabhizimusi vanoshandisa vanhu vanopfuura makumi matanhatu vachange vachishanda panzvimbo iyi. ”
Yemunhu-centric dhizaini neine tarenda yakasimba kumashure kweOracle Park
Zvekugadzirwa, timu reCrossing rakabatana Populous, yepasi rose yekuvaka uye dhizaini dhizaini iyo inonyanya kukoka vanhu pamwechete kuburikidza neakasarudzika uye akajairwa zviitiko. Vagadziri vekuona kuseri kweSan Francisco's Oracle Park nedzimwe nhandare, nhandare, uye nzvimbo dzemusangano pasi rese, Vazhinji vanogadzira kumisikidza kwenguva pfupi kweNFL Superbowl, maOlimpiki, uye FIFA.
"Tinoda kubatsira kukamura nzvimbo ino iri kubuda yeSan Francisco nemweya wakasarudzika, tichikoka vanhu kubva kunzvimbo dzekugara nedzemakambani kuti vagadzire nharaunda yavo kuburikidza neyakajairika uye serendipity yavakawana pano," akadaro Senior Principal paVazhinji, Michael Lockwood .
Ruzhinji rwevanhu 'basa purojekiti iyi rine zvarinoreva kunze kweSan Francisco, ichiva muenzaniso wekusika uye kufunga kwechinguva mashandiro enharaunda sezvavanenge vachivandudzwa uye vachivakwa, uye vachiratidza maitiro ekugadzira zvisungo zvine musoro munzvimbo dzakapoteredza nyika.
"Kuyambuka kune shanduko mukugadzira kukosha kwenzvimbo iyo patsika ingadai yakagara yakakomberedzwa panguva yekodzero," akadaro Mutungamiri Mukuru, Riki Nishimura. “Panzvimbo pekurega nzvimbo dzichishandiswa zvisirizvo, tiri kudzosera saiti kunharaunda, tichigadzira nzvimbo yekuti vanhu vafarire kuve pamwe zvakare. "Nepo kare saiti iyi yanga iri suo rekuti vanhu vasvike nekubva muguta, yave kuita nzvimbo yekuti vanhu vagadzire nzendo dzavo dzezuva iri uye vawane nguva dzisingakanganwiki nemhuri dzavo."
Ipo ECLP iri kukurumidza kuvhura saiti kuti vashanyi vakwanise kunakidzwa nekugadziridza, iri kushanda nePopulous kusimudzira zvirongwa uye dhizaini muChikamu chechipiri icho chichaita zvechokwadi Iyo Kuyambuka ive yekuvandudza, yepasi-kirasi nzvimbo. Bhiriji rakakwidziridzwa rinoyambuka chikamu chesaiti uye richigadzira yakasarudzika amphitheatre inofungidzirwa, sezvakaita danho raizoshanda seyemazuva ano dhorobha horo ine zviitwa, zviitiko zvetsika uye kuungana kwevanhu. ECLP yakachengeta Bay Area yakashambadzira agency PIVOT kuita anotsigira uye mudyandigere zano rekubatsira kuunza izvi nezvimwe zvinowedzerwa zvinhu kuhupenyu.
Sezvo kuita uku kuri kwekushandira pamwe kunosanganisira masangano mazhinji nevanhu, kuwedzera kutora chikamu kwevanyori, mabhizinesi uye vanobatsirana kuita uye kusimudzira saiti kunotambirwa.
Masangano uye vanhu vanofarira mikana yekudyidzana vanogona kushanya www.zmudyovna.net kana email [email inodzivirirwa] mamwe mashoko.
NezveEast Cut Landing Partner
East Cut Landing Partners (ECLP) ndeye Ruzhinji Runobatsira LLC rakagadzirirwa chinangwa chakati chekuvandudza nekushanda Kuyambuka kuEast Cut, nharaunda inosvika kune yaimbova Temporary Transbay Terminal muSan Francisco. Inoumbwa nemasangano mana eBay Area, matatu makuru muSan Francisco, ECLP inotora pane yakasarudzika ruzivo uye hunyanzvi hwemumwe nemumwe kuzadzisa chinangwa chakafanana: kuendesa yakafara nharaunda mvumo yekuti vese vafarire.
Kwete-purofiti East Dura CBD uye Mugwagwa Soccer USA ipa saiti uye chirongwa-chakanangana kugona kune iyo activation, nepo Kushanda Chaiko uye Nestory Park kununura budiriro, activation, uye ruzivo rwekushandisa.